थकाइ कम गर्न अपनाउनुस् यी उपायहरु
हरकोही मानिसलाई थकान महसुस हुन्छ । कडा मेहेनेत गर्नेलाई त थकान महसुस हुने नै भयो तर मेहेनेत नगरी एकै स्थानमा बसिरहे पनि थकाई लाग्छ । जब शरीरमा उर्जा सकिन्छ तब शरीरले थकान महसुस गर्न थाल्छ ।
थकाइ कम गर्ने केहि उपाय
कामको चक्करमा धेरैले पानी पिउन भुल्छन् । तिखा लाग्नु भनेको शरीरले पानीको मात्रा असाध्यै कम महसुस गर्नु हो । त्यसैले तिर्खा नकुरेर पानी पिइरहन जरुरी हुन्छ । खेल चिकित्सक गडसन भन्छन्, ‘अक्सिजन र पोषक तत्व मांशपेशीमा पुर्याउन पनि पानीको जरुरी छ ।’ यति मात्रै होइन, पानीको कमीले रगत बाक्लो बनाउँछ । मुटलाई कुशलतापूर्वक रगत पम्प गर्न रगतमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुन जरुरी हुन्छ ।
आइरन शरीरका लागि अत्यावश्यक तत्व मध्य पर्छ । यदि यसको कमी भयो भने पनि साह्रै थकित महसुस हुन सक्छ । एकदमै चिडचिडाहट, कमजोर र एकाग्र हुन सकिएको छैन भने बुझ्नुहोस् शरीरमा आइरनको मात्रा कम हुँदै गएको छ । त्यसैले पात भएका तरकारी, मेवा, दही लगायतको सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
ना शरीरका लागि ईन्धन हो । जस्तो गाडीको इन्जिनमा शुद्ध तेल पर्यो भने सहज ढंगले कुद्छ । त्यसैगरी मानव इन्जिनमा पनि ईन्धन सफा पर्नुपर्छ । विशेष गरी काम गरेर थाकेको र भोकाएको अवस्थामा खानेकुरा खाँदा होस पुर्याउनुपर्छ । दिउसोको खाजामा एकदमैं धेरै तरल पदार्थ पाइने खाजा खाँदा थकाइ कम हुन सक्छ । मासुजन्य र कार्बाेहाइडेड अधिक भएको खाजाले भोक त मेट्छ तर थकाइ बढाउन सक्छ ।
अत्यधिक थकाइ लाग्नु हुन सक्छ यी गम्भीर रोगका संकेत
आराम गरेपछि या सुतेपछि थकान मेटिनुपर्छ । सामान्यतया अधिकांश मानिसहरुमा यसो हुन्छ । तर यद सुत्दा या आराम गर्दा पनि थकाई मेटिदैन भने यो कुनै बिमारको संकेत पनि हुन सक्छ । यसलाई मेडिकलको भाषमा ‘क्रोनिक फटिग’भनिन्छ ।
यसले मानिसलाई जतिबेला पनि आलस्य महसुस गराउँछ । आलस्यताले उसको मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्तरमा असर पर्छ । व्यस्त दिनचर्या, खराब जीवनशैली, बिरामी, अनियमित या असन्तुलित खानपान, भाइरल इन्फेक्सन अथवा बायो–साइकोलोजिकल कारणबाट यो रोग लाग्न सक्छ ।
विभिन्न समयमा अत्याधिक आलस्यताले केही घातक रोगहरुको पनि संकेत गरिरहेको हुन्छ ।
अत्याधिक थकान महसुस हुने हृदयघातको पनि संकेत हुनसक्छ । हृदयाघातको ७० प्रतिशत मामिलामा केही हप्ता पहिलेदेखि नै असामान्य थकान अनुभव हुन थाल्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ । धूमपान र मदिराबाट टाढै रहने, सन्तुलित आहार लिने र ३० देखि ६० मिनेटसम्म एरोबिक एक्सरसाइज गर्ने गर्दा यसको जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । यदि हाई कोलेस्टेरोल, ब्लड प्रेसर, सुगर, लिपिड प्रोफाइल, इसीजी, टीएमटी परीक्षण र एन्जिओग्राम पनि गराउँदा सम्भावित खतरालाई रोक्न सकिन्छ ।
कलेजोमा समस्या हुँदा पनि केही व्यक्ति अत्याधिक थकान महसुुस हुनसक्छ । रगत लिँदा तथा लागूऔषध लिने मानिसमा हेपाटाइटिस सी हुने सम्भावना हुन्छ । यस्ता बिरामीलाई हल्का ज्वरो आउने, भोक नलाग्ने, शरीरमा पीडा हुने या रुघा लाग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
शरीरमा आइरनको कमी हुँदा आलस्यपना आउन सक्छ । महिलाहरुमा महिनावारीमा, गर्भ रहेका बेला या स्तनपान गराएका बेला आइरनको कमी हुन्छ । यसबाट चिडचिडाहट र आलस्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हिमोग्राम, हेमोग्लोबिन टेष्ट, ब्लड काउन्ट, सेरम आइरन, आइरन बाइन्डिङजस्ता परीक्षण गराउन आवश्यक हुन्छ ।
‘किन मलाई यति धेरै थकाइ लाग्छ ? व्यस्त, भागदौड र प्रतिस्पर्धाको यो समयमा प्रायः सबैले चिकित्सक, आफन्त र साथीभाइलाई सोध्ने प्रश्न हो यो । ‘एकछिन काम गर्नासाथ थकाइ लागिहाल्छ न त सुत्दा नै राम्ररी निद्रा पर्छ’, यो गुनासो पनि आम बनेको छ ।
उत्पादनशील उमेर समूहका मानिस पनि थकाइ लागेर केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘बिहान उठ्दा आलश्य हुन्छ, साँझ ढल्न नपाउँदै ओछ्यानमा पल्टिहालौं जस्तो हुन्छ, शरीर नै धान्न हम्मेहम्मे हुन्छ ।’ वृद्ध उमेरका मानिसलाई त थकाइले झनै समस्या दिन्छ ।
थकाइ लाग्दा घरको तलमाथि समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा अल्झिएको छ अधिकांश वृद्धवृद्धाको जीवन । निरोगी देखिनेहरू पनि थकाइ लागेर हैरान हुन्छु भन्छन् । आखिर किन लाग्छ थकाइ ?
चिकित्सकका अनुसार थुपै्र तर अदृश्य कारणले थकाइको महसुस धेरै हुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सरोजराज ओझाका अनुसार थाहा नै नपाई हुने ‘डिप्रेसन’ले मानिसमा थकाइको ज्यादै महसुस हुने गर्छ ।
‘डिप्रेसन भएपछि अधिकांशलाई अति नै निद्रा लाग्ने समस्या देखिन्छ । त्यसैबाट उसलाई शरीरमा थकाइ महसुस हुन थाल्छ ।’ डिप्रेसनका बेला जे गरे पनि थकाइ लाग्ने हुन्छ । त्यसैले थकाइको समस्या धेरै नै भएको अनुभव भइरहेको छ भने चिकित्सकको परामर्श समयमै लिन जरुरी छ भन्छन् डा. ओझा ।
कतिपय चिकित्सकका अनुसार धेरै थकाइ लाग्नुमा निद्रामा श्वासप्रश्वास बन्द हुने समस्याका कारण पनि हुनसक्छ । जसलाई चिकित्सकले ‘स्लिप एप्निया’ भन्ने गर्छन् । यसका कारण अति धेरै थकाइ लाग्ने र रक्तचाप, मधुमेह, डिप्रेसन जस्ता जटिल समस्या पनि निम्तने गर्छ ।
थाकाइ लाग्नु हामीले दैनिक खाने खानासँग पनि सम्बन्धित छ । बिहानको खाजा नखाई एकैपटक खाना खानाले पनि दिनभरि थकाइ महसुस हुन्छ । नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालकी डायटिसियन डा. प्रणित सिंहका अनुसार बिहान खाजा खाने र खाना पनि समय मिलाएर खाने हो भने थकाइ कम लाग्छ ।
बिहान खाली पेट राख्ने र एकैपटक कार्बोहाइड्रेड धेरै भएका खाना खानाले शरीरमा आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वको कमी भई काम गर्न अल्छी लाग्ने वा कार्यक्षमतामा कमी आउने गर्छ ।
केही अध्ययनले भनेका छन्, ‘धेरै नै थकाइ लाग्छ भने सातामा एकपटक सुत्नुभन्दा पहिले एक ग्लास मनतातो दूध पियो भने त्यसले थकाइ कम लाग्छ । सिंहका अनुसार पर्याप्त पानी पिउँदा पनि थकाइको समस्या हटाउन सकिन्छ । ‘हाम्रो शरीरमा रगतलगायत तरल पदार्थ उत्पादन गर्न पानी धेरै नै आवश्यक पर्छ ।
पानी कम हुँदा रगत बाक्लो हुँदै जाँदा मुटुमा दबाब पर्न जान्छ र निकै थकाइ महसुस हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले प्यास नलागे पनि पानी बारम्बार पानी पिउनुपर्छ ।’ दिउँसो सुत्ने बानीले पनि थकाइ महसुस हुन्छ । चिकित्सक भन्छन् ‘ दिउँसो एकैछिन सुतेर उठ्दा आँखा लोसे हुने र अल्छी लाग्छ । थकाइ मेट्न गहिरो निद्रामा सुत्नुपर्छ । गहिरो निद्रा लाग्न कम्तीमा आधा घन्टा लाग्नसक्छ ।’
अध्ययनले कफी पिउँदा थकाइ मेटिने पुष्टि गरेका छन् । तर धेरै मात्रामा क्याफिनको प्रयोगले थकाइ मेटाउने नभएर बढाउने काम गर्छ । डा. सिंहका अनुसार धेरै कफीले गर्मी बनाउँछ । विशेषगरी दिउँसो ३ बजेपछि वा सुत्नुअघि कफी पिउँदा बढी थकाइ महसुस हुन्छ ।
थकाइ लाग्ने समस्या भएका मानिसले नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ या योगलाई अपनायो भने पनि थकाइको महसुस कम हुनसक्छ । धेरै नै थकाइ लाग्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो संकेत होइन ।
संसारमै घातक मानिएको ‘वेगनर्स’ रोगका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ । मिर्गौला, श्वासप्रश्वासका धमनी, रक्तनशालगायतमा थाहै नपाउने गरी क्षति पुर्‌याउने उक्त रोगका कारण पनि थकाइ लागेको हुनसक्छ । त्यसैले थकाइ लाग्ने विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।
सामान्य ठानेर टारियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो क्षति पुर्‌याउन सक्छ । समयमै उपयुक्त चिकित्सकसम्म पुगी थकाइबारे परामर्श गर्नु जाती हुनेछ ।